Madaxtooyada Soomaaliya oo isugu yeertay madaxda maamul goboleedyada
2nd March 2021 by Barre Leave a Comment
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyay in maalinta Khamiista ah ee 4-ta bisha uu martigelin doono “munaasabad lagu dhammeystirayo” hirgelinta heshiiska doorashada.
Waxa uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir, xilli uu qabsoomi waayay shirkii la filayay inay yeeshaan bartamihii bishii hore.
“Kulankan oo hal maalin soconaya wuxuu ku qabsoomayaa magaalada Muqdisho, waxaana looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii Guddiga Farsamada Doorashada ee ka soobaxay shirkii Baydhabo 15-16 Febaraayo 2021, kaas oo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17kii Sebteembar 2020,” ayaa lagu sheegay war ka soo baxay Villa Somalia.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ahmiyad wayn siinayso “hirgelinta doorasho hufan oo jawi nabdoon ku qabsoonta.”
Heshiiska Ra’iisal wasaare Rooble iyo mucaaradka
Baaqa madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shalay gelinkii dambe ay ku heshiiyeen midowga murashaxiinta mucaaradka iyo ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble magacaabidda guddiyo ka shaqeeya qabanqaabada dibadbax nabadeed iyo baarista dhacdooyinkii 19-kii Febraayo.
Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in mucaaradka ay qabsadaan dibedbax nabdoon oo Muqdisho ka dhaca Sabtida 6-da March, ammaankiisana ay sugto dowladda Federaalka.
Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaan ka hadlin heshiiskaas, waxaana qaar kamid ah mucaaradka ay tilmaameen in heshiiskaasi buray.
Senatar Ilyas Cali Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka tirsan xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa bartiisa Facebook ku qoray.
“Farmaajo Iyo Rooble maadama ay heshiiskii ka baxeen, mudaaharaadka waxaa loo soo raraa Khamiis 4 March”.
Puntland iyo Jubaland
Maamullada Puntland iyo Jubaland ayaan weli ka hadlin kulanka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo. Labadan maamul ayaa horay shuruudo ugu xiray ka qeybgalka kulankaas.
Mid kamid ah shuruudaha oo ahayd in xal laga gaaro wixii Muqdisho ka dhacay 19-kii February ayaa u muuqata mid meesha ka baxday.
Garowe iyo Kismaayo ayaa shardi kale ka dhigay in kulanka madaxda lagu qabto meel ammaankeeda la isku haleyn karo oo kamid ah Muqdisho.
Qoraalka sawirka, Axmed Madoobe iyo Siciid Deni
Khilaaf ka dhashay qodobo kamid ah heshiiskaas ayaa horseeday in kulan ay madaxda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku yeesheen Dhuusamareeb horraantii sanadkan uu ku soo idlaado natiijo la’aan.
Hogaamiyayaashaas ayaa kadib guddi farsamo oo ka kooban 14 xubnood u diray magaalada Baydhabo, waxaana guddigu shaaciyay in laga heshiiyay dhammaan qodobadii la isku hayay.
Qoraalka sawirka, Xubno ka tirsan Beesha Caalamka ee Soomaaliya
Kulan ay madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadiir ay Muqdisho isugu tagaan 18-kii February ayaa la filayay in dhinacyada ay ku kala saxiixan doonaan heshiiska ay gaareen guddiga farsamada, balse taasi ma dhicin.
Mudada xil-heynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo afar sano ahayd ayaa ku ekeyd 8-dii February. Mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka heyn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto.